“Anigu Xisbina U Ololayn Maayo Ee Si Odaynimo Ayaan U Shaqaynayaa Wax Siyaasadana Wakhtigab Kuma Hawlani,Anigu Sadexda Xisbi Midkoodna Kumaan Biirin,Sool-na Waxa Qudha Ee Ku Soo Kordhay Waa Nabada”….Axmed Cabdi Xaabsade | Somaliland.Org
December 29, 2008	Laascaanood (Somaliland.Org)- siyaasiga Axmed Cabdi Maxamuud (Xaabsade) oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee gobolka Sool ayaa dadafeeyey in saddexda xisbi midkoodna olole siyaasadeed uga wado gobolka Sool, isagoo intaa ku daray inaanu wakhtigan xaadirka ah wax siyaasada aanu ku luglahayn, balse uu socdaalkiisa xilliga uu ku joogo magaalada Laas-caanood uu la xidhiidho ku saabsan yahay booqasho uu ugu tagay Hooyadii, isagoo dhinaca kalana tilmaamay in muddadii maamulka Somaliland ka talinaayey gobolka Sool ay u soo kordhay oo kaliya nabadi balse aan ilaa hadda la haynin horumarintii kale ee gobolku u baahnaa.
Axmed Cabdi Xaabsade ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ilaa imika saddexda Xisbi Qaran aanu midkoodna ku biirin balse uu tilmaamay inay u siman yihiin waxaanu siyaasiga xaabsade sidaas ku sheegay mar uu xalay wargeyska Haatuf khadka telefoonka waraysi kula yeeshay isagoo jooga xarunta magaalo madaxda Sool ee Laascaanood, oo uu maalintii doraad socdaal ugu kicitimay isagoo ka baqoolay caasimada Somaliland ee Hargeysa, isagoo dhawaana socdaalo dibadeed kaga soo laabtay dalal ka tirsan Yurub oo uu u tagay arimo caafimaad, waraysigaasi iyo jawaabihii uu ka bixiyeyna waxa uu u dhacay sidan:
S: Socdaalka wakhtigan xaadirka ah aad ugu baxday magaalada Laascaanood oo lagu macnaynayo socdaal siyaasadeed muxuu ku saabsan yahay ?
J: socdaalkan aan ku imid magaalada Laascaanood waa mid la xidhiidha Fasax aan ku soo gaadhay hooyaday oo xanuunsanaysa balse wax kale oo siyaasada saamayn kuma laha haba yaraatee socdaalkaygu.
S: waxaa la sheegayaa in safarkan aad ku tagtay Laascaanood uu la xidhiidho mid taageero Kaambayn ah aad ugu raadinayso xisbiga UDUB sidii uu kalsooni uga heli lahaa bulshada ku dhaqan gobolka Sool arimahaasi maxaa ka jira ?
J: anigu xisbina u ololayn maayo xisbina ka ololayn maayo, balse socdaalkaygu waa mid la xidhiidha arimaha gaarka ah ee aan kuu sheegay.
S: waxaa la sheegayaa muddooyinkan dambe in xisbiga UDUB uu xidhiidh hoose oo siyaasadeed uu idin dhex maray iyadoo wararka qaarna sheegayaan in xisbiga UDUB aad ku biiri doonto xilliga shirweynaha la gaadho arimahaasi maxaa ka jira ?
J: anigu xisbina umaan galin idinkuunbaa kolba wax iska qora oo shalayba waxaad igu qorteen xisbiga UCID, waxaanse idinka codsanayaa inaydaan kolba xisbi igu qorin, waxaanan kuu sheegayaa in aanan ilaa hadda xisbina wali si toos ah ugu biirin.
S: dad badan ayaa u arka inaan damac siyaasadeed kaa madhnayn, oo laga yaabo in hunguri siyaasadeed kaaga jiro talada hogaanka mustaqbalka Somaliland, arimahaasi maxaa ka jira ?
J: waxaan kuu sheegayaa anigu wakhtigan xaadirka ah wax siyaasad ah kuma hawlani ee si odaynimo ayaan dalka ugu shaqaynayaa.
S: ma laga yaabaa inaad saddexda xisbi Qaran KULMIYE, UCID, UDUB doorashada madaxtooyada horteeda aad mid ka mid ah ku biirto ?
J: ilaa hadda wali maan qaadan inaan xisbi ku biiro.
S: waxaa lagugu tiriyaa inaad xisbiga UDUB labada xisbi mucaarad ee kale saaxiibtinimo gaar ahi idinka dhexayso, gaar ahaan madaxweyne Riyaale arimahaasi maxaa ka jira ?
J: anigu cid walba xisbi walba iyo shicibkaba la saaxiib ayaan ahay xiitaa saxaafadiina, miyeynaan saaxiibo ahayn, balse cid gaar ah saaxiib lama ihi.
s: hawlaha Diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee ku soo foole dhawaan gobolka Sool in laga qabto rajo intee leeg ayaad ka qabtaa in diiwaangelintu ka hirgali doonto gobolka Sool ?
j: waxaan rajaynayaa oo aan qabaa aaminsanahayna in diiwaangelintu codbixiyeyaashu ay ka hirgeli doonto guud ahaanba gobolka Sool, cid shaki iyo muran galin kartaana ma jirto.
S: maxaa u soo kordhay ayaad is leedahay muddadii maamulka Somaliland gacanta ku hayey maamulka gobolka Sool ?
J: Sool nabad baa u soo korodhay waxa ugu weyn ee aan ku sheegi karaana nabadgelyada iyo amaanka u soo kordhay muddadaas.
S: marka laga tago dhinaca nabadgelyada wax horumar ah oo kale oo u soo kordhay gobolkaas Sool ma noo sheegi kartaa mudadii Somaliland ka talinaysay ?
J: dhinicii horumarinta adeegyada Bulshada wali lama hayo, balse waxaan kuu sheegayaa in ilaa hadda nabadaasi u soo korodhay. Xigasho Haatuf